Urursiyaasadeedka Midnimo oo walaac muujinaya iyo Maamulka Madaxweyne Faroole oo rajo wanaagsan qaba.
Home»Somali News»Urursiyaasadeedka Midnimo oo walaac muujinaya iyo Maamulka Madaxweyne Faroole oo rajo wanaagsan qaba.
Facebook	Twitter	Friday, February 22 2013	Urursiyaasadeedka Midnimo oo walaac muujinaya iyo Maamulka Madaxweyne Faroole oo rajo wanaagsan qaba.	Written by Admin
Add comment	Garowe ( SPR ) : Urursiyaasadeedka Midnimo oo kamid ah Lixda Urur siyaasadeed ee u taagandoorashooyinka Dimuqraadiga ah ee la filayo in ay ka qabsoomaan Puntlandayaa walaac xoogan ka muujiyay isbadalo lagu samaynayo xeerka doorashada.
Axmed Ismaaciil Muuse oo ah Afhayeenka KMG ee Urur siyaasadeedka Midnimoayaa ka hadlay Warsaxaafadeed uu Ururkoodu soo saaro,taasi oo ay walaacuga muujinayaan habka ay wax u wadaan gudiga kmg ee doorashooyinka Puntland,iyadoonaay ku tuhmayaan in xisbiyo gaar ah ay u danaynayaan.
Axmed ayaa sheegay in Ururkoodu uu qaadacayo doorashooyinka la filayo in aydhacaan hadii wax laga badalo qodobo dastuuri ah oo ku saabsan arimaha doorashad,waxaana uu tusaale ahaan usoo qaatay Qodobada,qodobka ka hadlaya in qofkacodka bixin karaa yahay qof muwaadin reer Puntland ah, da diisuna aysan ka yarayn 18 jir oo haysta warqad aqoonsi ah,Kan labaadna yahay, in doorashada lagu galo iyadoo aysan jirin diiwaanka codeeyayaasha,taasina ay u arkayaan hadii ay dhacdo in lagu shubanayocodka.
Dhanka kale Maamulka talada haya ee Puntland oo ah Ururka Horseed ayaa isaguiska fogeeyay in uu qabo walaac hadii wax laga badalo qodobadaasI.
Wasiirka Maamul wanaaga ee Puntland Maxamed Faarax Ciise Gaashaan ayaa sheegaygeedi socodka dimuqraadiyada Puntland ee wakhtigani in uu yahay mid hana qaad ahsidaasi darteedna ay u dul qaadanayaan wax kasta oo lagu gaari karo hirgalinta nidaamkaasi.	Social sharing
« VIDEO+SAWIRO : Urur siyaasadeedka Horcad oo Shirweynihiisii Koowaad ku qabtay Boosaaso iyo Maamul rasmi ah oo Ururkaasi doortay.	Ardayda kaalimaha hore ka galay Imtixaankii dhexe Iskuulka Cumar Bin C/casiis oo Abaal marino la gudoonsiiyay. »